Somaliland: Xisbiga Waddani Oo Ayaandaro Ku Tilmaamay Garoonkii Diyaaradaha G/Awdal Inuu Xidhnaado Oo Xukuumada Kulmiye Tahli Kari Waydo Hagaajintiisa - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xisbiga Waddani Oo Ayaandaro Ku Tilmaamay Garoonkii Diyaaradaha G/Awdal Inuu Xidhnaado...
Somaliland: Xisbiga Waddani Oo Ayaandaro Ku Tilmaamay Garoonkii Diyaaradaha G/Awdal Inuu Xidhnaado Oo Xukuumada Kulmiye Tahli Kari Waydo Hagaajintiisa
“Dhibaatada Iyo Ayaandarada Jirtaa Waxa Weeyi Wasaarada Duulista Hawada Somaliland Wax Qorshe Ah Kama Laha Garoonka Diyaaradaha Gobolka Awdal” Xoghaye Duulista Hawada, Nuuradiin Diini
“Hadii Maanta Garoonkani Shaqayn Lahaa Qaranka Faa’iido Ayay U Noqon Lahayd Oo Diyaarada Jabuuti Ka Soo Kacda Iyo Ta Magaalada Diridhaba Ka Soo Kacdaana Si Fudud Ayay U Iman Lahayd Halkan”
Xoghayaha Duulista Hawada ee xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani, Nuuradiin Diini ayaa sheegay in Xukuumada Kulmiye aanay wax qorshe ah ka lahayn Garoonka Diyaaradaha ee Gobolka Awdal, waxaanu tilmaamay hadii garoonkaasi uu shaqayn lahaa in faa’iido badani ay uga soo hoyan lahayd Qaranka iyo xukuumadaba.
Mr Nuuradiin Diini, Xoghayaha Duulista Hawada ee xisbiga Waddani waxa uu sidoo kale sheegay in afar Wasiir oo soo maray Wasaarada Duulista intii xukuumadan Kulmiye jirtay ay afartuba ku guuldaraysteen in garoon laga shaqaysiiyo iska daaye inay silig ku soo wareejiyaan dhulka Garoonka diyaaradaha, wakhti xaadirkan la baloodhaystay.
Xoghayaha Duulista Hawada ee xisbiga Waddani waxa uu sidaasi ku sheegay mar uu shalay oo Jimce ahayd uu kormeer ku tagay garoonkii diyaarada ee magaalada Boorama, kaas oo dayacnaanta ku habsatay ka hadlayaana waxa uu yidhi “Maanta oo Jimce ay tahay waxa aanu ku suganahay gobolka Awdal caasimadiisa Boorama, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Isaaq International Airport.
Garoonkan aynu joogno wuu xidhan yahay cid hada isticmaashaa ma jirto dhabihiisa (run-way) doogbaa ka baxay, haba yaraatee inaba la odhan maayo goobtan aanu ku suganahay waa madaar ama garoon diyaaradeed oo uu leeyahay gobol ama magaaladii Boorama.
Xiligii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal garoonkani wuu shaqaynayey maalin kasta oo Isniin ah diyaarad ayaa fadhiisan jirtay, diyaaradaasi waxay ka iman jirtay Djibouti iyadoo dadka qurba Jooga ah ee u dhashay gobolka soo qaada, halkana keenta. Waxyaabaha cajiibka ah ee intii aanu halkan joognay aanu ku aragnay waxa ka mid ah Albaabada ayaa loo laabay oo dhamaan xafiisyadii, Terminalkii iyo wixii oo dhami way xidhan yihiin.
Waxa taa ka sii daran oo ayaan daro ah kaabadaha halkaa yaala, waxa loogu talogalay in xoolaha lagaga celiyo oo dayr taar loogu sameeyo, inta mashruuc lagu qaatay oo halkan la dhigay ayaa la iskaga tagay intii ay jirtay xukuumadan Kulmiye afar wasiir ayaa soo maray Wasaarada Duulista iyo Hawada oo uu ku jiro Faraxaan Aadan Haybo way dhagax dhigeen waxaana halkaa yaalaa waa dhagaxaantiisii.
Garoonkan dhulkiisii waa la qaatay waa la baloodhaystay dadbaana leh oo hanti ummadi leedahay ayuu noqday oo waa la googoostay, arintaa maanta dawladd adag oo gacan adag ku qabata oo soo celisa mooyaane hadal kama taagna.” Ayuu yidhi Xoghayaha Duulista Hawada ee Xisbiga Waddani, Mr Nuuradiin Diini waxaanu intaasi ku daray “Gobolkan Awdal waxa ku dhaqan bulshada Somaliland qayb ka mid ah, waana gobolkii Somaliland lagu aasaasay, waana Gobolka qurbajooga ugu tirada badan leh ee ay dibadaha ku maqan yihiin, sidoo kale Gobolkani waxa uu xidhiidh la leeyahay Dalka Jabuuti iyo dalka Ethiopia oo aynu jaar nahay, khaasatan magaalada Diridhaba. Hadii maanta Garoonkani shaqayn lahaa qaranka faa’iido ayay u noqon lahayd oo diyaarada Jabuuti ka soo kacdaa si fudud ayay u iman lahayd halkan, ta magaalada Diridhaba ka soo kacdaana si fudud ayay u iman lahayd halkan, ta Jigjiga ka soo kacdaana si fudud ayay u iman lahayd halkan.
Waxa kale oo Garoonkan Diyaaradaha ee gobolka Awdal furitaankiisu uu ka qayb qaadan lahaa isku socodka gobolada dalka haday tahay gobolka Saaxil iyo Gobolka Awdal oo uu isku xidho, haday tahay gobolka Togdheer iyo Gobolka Awdal oo uu isku xidho Gobolka Sool/Sanaag oo uu ku xidho gobolka Awdal, intaasiba waa la ilaabay.
Dhibaatada iyo ayaandarada jirtaa waxa weeyi Wasaarada Duulista iyo Hawada Jamhuuriyada Somaliland wax qorshe ah kama laha Garoonka Diyaaradaha Gobolka Awdal, Wasiirku wuxuu ku jira olole reereed oo xisbi, Agaasimihii sidoo kale, habeen kastana waxay dhex fadhiyaan magaalada Hargeysa oo waxaad moodaa in gobolada kale ee dalka inay Wasiiro u yihiin in aanay aqoonin oo xerooyinkooda iyo xaafadahooda ay ku eegyihiin.” Ayuu yidhi Xoghayaha Duulista Hawada ee xisbiga Waddani.
Why Can’t Somaliland Deal With Russia and Its Allies or Even With Israel?
Japan oo sheegtay inaysan ka baqeynin IS